लगातार बढेको सुनको भाउ आज भने पत्याउनै नसकिने गरि यस्तो भयो ! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/लगातार बढेको सुनको भाउ आज भने पत्याउनै नसकिने गरि यस्तो भयो !
गत पुससम्म मुलुकभर ५ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मुद्रा नागरिकसँग छ । उक्त पैसा विभिन्न माध्यममार्फत राष्ट्र बैंकमा फर्किन्छ । यसरी राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिएको तर बैंकमा नफर्किएको पैसालाई नागरिकसँग रहेको रकम ९करेन्सी हेल्ड बाई पब्लिक० भनिन्छ ।
नागरिकका साथै सहकारी, लघुवित्त वित्तीय संस्थालगायत औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको रकमलाई नागरिकसँग रहेको पैसा मानिन्छ । आफ्नो आवश्यकता पूर्ति गर्न उक्त पैसा नागरिकले आफूसँग राख्ने भएकाले यसलाई चलनमा रहेको भनिएको हो । उक्त रकममा बैंक तथा वित्तीय संस्था ९क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्था० मा रहेको रकम पनि जोडेपछि चलनचल्तीमा रहेको रकम निकालिन्छ ।